Pro 6 | Mal1865 | STEP | Anaka, raha niantoka ny namanao ianao Ary nandray tanana hiantoka ny hafa,
Ny tsy mahamety ny miantoka olona sy ny hakamoana sy ny fitaka sy ny avonavona; ary ny zavatra fito loha izay halan'i Jehovah
1 Anaka, raha niantoka ny namanao ianao Ary nandray tanana hiantoka ny hafa, 2 Ka voafandriky ny teny naloaky ny vavanao ianao Sady voasingotry ny teny naloaky ny vavanao, 3 Dia izao no ataovy, anaka, ka afaho ny tenanao (Satria efa mby eo an-tanan'ny namanao ianao): Andeha mihohoka sy mifona mafy amin'ny namanao. 4 Aza avela hatory akory ny masonao, Ary aza avela hilondolondo ny hodimasonao. 5 Afaho ny tenanao toy ny gazela ▼
▼ Izahao 2 Sam. ii.18
miala amin'izay mihazona azy, Ary toy ny voron-kely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika.
6 Mandehana any amin'ny vitsika, ry ilay malaina; Diniho ny fanaony, ka mba hendre; 7 Tsy manana komandy ireny, Na mpifehy, na mpanapaka, 8 Nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy, Ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. 9 Mandra-pahoviana no mbola handry ihany ianao, ry ilay malaina? Rahoviana no hifoha amin'ny torimasonao ianao? 10 Mbola hatory kely ihany, mbola ho renoka kely ihany, Ary mbola hanohon-tanana kely hatory, 11 Dia ho tonga toy ny lehilahy mimaona hamely ny alahelonao, Ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. 12 Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy Dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, 13 Izay mami-maso sy manao famantarana amin'ny tongony Ary manao baiko amin'ny rantsan-tànany; 14 Fahafetsena no ao am-pony, Mihevi-dratsy mandrakariva izy Sady mamafy ady. 15 Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjo azy; Ho torotoro tampoka izy, ka tsy hisy fahasitranana.
16 Izao enina izao no halan'i Jehovah, Eny, fito no ataony ho fahavetavetana: 17 Ny maso miavonavona, ny lela fandainga, Ary ny tanana mandatsa-drà marina, 18 Ny fo mamoron-tsain-dratsy, Ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy, 19 Ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, Ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy.
Fananarana hankatò tsara ny ana-dray aman-dreny mba hifady ny fifangajangana
20 Anaka, tandremo ny didin-drainao, Ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao. 21 Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo, Ary afehezo eo am-bozonao, 22 Raha mandeha ianao, dia hitari-dalana anao ireo; Raha mandry ianao, dia hiambina anao; Ary raha mifoha ianao, dia hamelona eritreritra anao. 23 Fa jiro ny didy, ary fanazavana ny lalàna, Ary lalan'aina ny anatra famaizana, 24 Hiarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy, Ary amin'ny fandroboan'ny lelan'ny vahiny janga ▼
▼ Heb. lelam-bahiny
. 25 Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaran-tarehiny; Ary aoka tsy hahazo anao amin'ny hodimasony izy. 26 Fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hananan'ny lehilahy sombi-mofo, Ary ny amin'ny vadin'ny olona no mihaza ny aina soa. 27 Mahatondra afo ao an-tratran'akanjony va ny olona, Ka tsy ho may ny akanjony? 28 Misy mahadia vain'afo va, Ka tsy ho may ny tongony? 29 Dia toy izany izay mankamin'ny vadin'ny namany; Tsy maintsy hampijalina izay mikasika azy. 30 Tsy avelan'ny olona ho afa-maina ny mpangalatra, Raha maka zavatra hahavoky ny tenany izy, na dia noana aza; 31 Fa ▼
▼ Na: Ny olona tsy manome tsiny ny mpangalatra, noana; Nefa
raha azo izy, dia hampanoneriny fito heny Ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. 32 Izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampy saina; Izay ta-hanimba tena no manao izany. 33 Voakapoka sy afa-baraka izy Ary tsy ho afaka amin'ny tondro-molotra. 34 Fa ny fahasaro-piaro dia mampirehitra ny fahatezeran-dehilahy, Koa tsy hamindra fo izy amin'ny andro hamaliany. 35 Tsy handray vola ho enti-manalady ▼
akory izy, Ary tsy hety, na dia omenao fanambatambazana be aza.